Igwe na-ejuputa igwe, ihe onunu na-ejuputa igwe, ihe ọ Hotụ Hotụ na-ejuputa ihe ọkụkụ - Higee
Automatic Cup Type Chemical ndochi Machine Line
Automatic ncha ntutu ndochi Machine Line
Na ike R & D na mmepụta ikike exported 100+ mba maka iche iche iche iche nke ndochi na mbukota mmepụta akara na Food, onunu, Pharmaceutical, Ngosiputa Ngwa wdg Industries.
Anyị na-arụ igwe anyị na akụkụ ndị ama ama na akụrụngwa dị mma. Anyị nwere nlezianya QC njikwa iji nye igwe dị mma ezi aha na ụlọ na mba ọzọ. “Àgwà bụ Omenala anyị.”
Ọ bụghị naanị maka Na-ejuputa Capping, Labeling na Packaging Machine, anyị na-enye otu nkwụsị ọrụ maka ahịa gụnyere kalama ịfụ igwe, usoro ọgwụgwọ mmiri wdg.
Anyị nwere ike oru oru otu na Global ahịa otu na multi-asụsụ ọrụ maka tupu ahịa na mgbe-ahịa. Nakwa site na nnwale ahụmịhe kọstọm bara ụba.
Beverage Industrylọ Ọrụ
Industrylọ Ọrụ Ngosiputa Ngwa
Chemicallọ Ọrụ Chemical Chemical
Akụkọ kacha ọhụrụ & Ozi
Onye ọ bụla na-azụ ahịa chọrọ ịnweta Igwe Na-ejuputa Ngwa na Nkọwapụta maka mmepụta nkwakọ ngwaahịa ha. Site na ahụmịhe anyị, anyị nwere ike ịchọta ngwọta kacha mma iji gboo mkpa gị. Anyị ga-egosi ụfọdụ ntuziaka ọrụaka & ọhụụ ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ akụkọ ebe a iji mee ka ịmatakwu.
N'oge nke abụọ China International Import Expo na November, 2019 ndị nnọchi anya Africa rutere Sh ...
Kedu uru na ọghọm nke PLA ...
Dabere na mbipụta nke ahịhịa nkewapụtara, ụgwọ na nchedo gburugburu ebe obibi, bụ ite PA bụ ...
kwuru ma dozie ọnọdụ
Ọ dị iche n'etiti ụdị eriri igwe na ụdị ọnọdụ edozi maka ịkọ akara karama Kasị tim ...
Otu esi enweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa na nke mbụ ...
Banyere igwe ihe eji eme ahia ahia n'aka ndi ahia si mba ofesi, ihe ndi kacha akacha ...